Facebook သည်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်များကို virtual credit များ ၀ ယ်ရန်စတင်ခဲ့သည် Gadget သတင်း
Facebook သည်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်များကို virtual credit များ ၀ ယ်ယူသည်
Facebook သတင်း | | လူမှုရေးကွန်ယက်, ဂိမ်းတွေကက
များအတွက်လူမှုရေးဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံကုမ္ပဏီများ၏မကြာသေးမီကအားထုတ်မှုပြီးနောက် Facebook ကကဲ့သို့ Zynga၊ Playdom နှင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများနှင့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များရရှိရန်အတွက်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်များကိုစတင်ထုတ်လုပ်သည့်အခြားဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများသည် juegos ဖြတ်. ကို virtual ငွေကြေးကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ ...
ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးလူမှုကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသူများသည် ၀ ယ်ယူနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည် prepaid ကတ်များ "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ" နဲ့အားသွင်း ကို virtual ငွေကြေး, ၏ 1.743 ထူထောင်မှုအတွက်ခရက်ဒစ်ဖြစ်ပါသည် အမေရိကန် နှင့် Target.com က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။
အဆိုပါကဒ်များမှာဒေါ်လာ ၁၅၊ ၂၅ နှင့် ၅၀ ဒေါ်လာနှုန်းရှိမည်ဖြစ်သည်။ Facebook သည်အမေရိကန်သုံးစွဲသူများကြိုဆိုသည့်စာမျက်နှာရှိ Target store locator မှတစ်ဆင့်ဤအစီအစဉ်ကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
ဤကဒ်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သင်ကလစ်နှိပ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည် «လက်ဆောင်ကဒ်ရွေးပါ။ စာမျက်နှာအတွင်းကစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုအတွက်ဖွင့်ထားတယ် ခရက်ဒစ်၊ pop-up ၀ င်းဒိုးတစ်ခုအားဖြင့်၎င်းသည်နောက်ကျောတွင်ခြစ်ရာနှိပ်မည့်နံပါတ်ကိုထည့်ရန်တောင်းဆိုသည်။ "ယခုရွေးပါ" နှင့်ပမာဏ ခရက်ဒစ် သင်၏အတွက်ရရှိခဲ့သည် Facebook မှာ။
ကျွန်ုပ်တို့မသိသောငွေပေးချေမှုပုံစံသည်သုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိမည်လားဆိုတာဖြစ်သည် ဥရောပ, အ ကမ္ဘာ၏ကျန်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ပြားအသစ်များလက်ခံရရှိပါကစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည် ယူအက်စ်အေ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » Facebook သည်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်များကို virtual credit များ ၀ ယ်ယူသည်
61 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ချီလီအတွက်လည်း😀! Queee ကောင်းသောအကြံဥာဏ် - ခ
Eveelyn ကိုပြန်မေးပါ ဦး ။
ဒါပေမယ့် code ကဘာလဲအမြဲတမ်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ငါသာအခန်း9after ပြီးနောက်အောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားလို့မရပါဘူး
Carlos Reyes ဟုသူကပြောသည်
CARLOS REYES သို့ပြန်ပြောပါ
ငါခရက်ဒစ်ရချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာခရက်ဒစ်ကဒ်မရှိဘူး၊ ဒါကမက္ကစီကိုမှာဖြစ်သင့်တယ်၊ ပြီးတော့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါ။
Pathiie Scholarship သို့ပြန်သွားပါ
25:2010 pm မှာစက်တင်ဘာလ 10/52
ဗင်နီဇွဲလား alsonnn အဘို့ ... ဒါဟာ superrr ပါလိမ့်မယ် ...... BIENNNNNNNNNNNNNNN
DARIO MARIN ဟုသူကပြောသည်
DARIO MARIN သို့ပြန်သွားပါ
မက္ကဆီကိုအတွက်ကျေးဇူးပြုပြီး !!!! ဒီနေရာမှာ facebook wenoo ကိုငါ့နေရာဒေသမှာအများကြီး jejejje send အနည်းငယ်ပို့သည် !!!!
မည်သည့်ကုဒ်ကိုကျွန်ုပ်ရေးသည်၊ ကူညီပါ၊ ရေးသားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ
သူတို့ကဗင်နီဇွဲလားမှာရှိသလားသိလား ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဈေးကွက်နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းမှာမကြိုးစားခဲ့တာ၊ သူတို့ကအမေရိကန်မှာမကြိုက်ဘူးလို့ထင်နေကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်လက်တင်အမေရိကကဘာလို့ဒီအရာအားလုံးကို gringos မှာပစ်တာလဲမသိဘူး။
ခရက်ဒစ်ရရန်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမှာ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုဝယ်ခြင်း (သို့) Gamecoins တွင် ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည် http://www.gamecoins.com ၎င်းတို့ကို Facebook ချေးငွေများအတွက်လဲလှယ်နိုင်သည်။
ကော့စတာရီကာအတွက်လည်း ကျေးဇူးပြု၍ ကောင်းသည်။
သူမကို venezuelaaaaaaaaaaaaa သို့ယူလာပါ
သူတို့ကိုငါ urgentlyeeeeeeeeeeeeeee လိုအပ်ပါတယ်
ဒီကဒ်ဟာဗင်နီဇွဲလားရဲ့ဌာနခွဲများကိုမကြာမီရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာဂိမ်းများတွင်သာမကသူငယ်ချင်းများနှင့်အသိမိတ်ဆွေများအတွက်လက်ဆောင်များအဖြစ် virtual ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ငွေချေးစာချုပ်များကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။ လူငယ်များသည်ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့် ၀ ယ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုတွင်၎င်းတွင်မရှိသောကြောင့်ဤကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လိမ့်မည်။
စင်သီယာ * အေ * ဟုသူကပြောသည်
POR မျက်နှာသာ .... !! ဒီကဒ်တစ်ခုလုံးကိုဗင်နီဇွဲလားမှာကျွန်မတို့လိုတယ်။ WE FACEBOOK ကိုအသုံးပြုတဲ့ဗင်နီဇွဲလားအသုံးပြုသူတွေ၊ သူနဲ့ GAMES တွေများများစားစားရှိပါပြီ။
CINTHYA * A * သို့စာပြန်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့အများစုသည်ဗင်နီဇွဲလားတွင်ဤကဒ်ပြားများလိုအပ်သည်။ ဤနေရာတွင်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ခရက်ဒစ်အမြောက်အများကိုသုံးကြသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုသူတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပါကထိုကဒ်များမှာမှားယွင်းမှုမရှိစေရန်ထပ်မံအားဖြည့်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းအစားဗင်နီဇွဲလားသုံးစွဲသူအားလုံးပြုလုပ်သောကတ်များတွင်အလွန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်လိမ့်မည်
luis - Paypal ကိုစစ်ဆေးပါ ဟုသူကပြောသည်
အင်တာနက်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးသည်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးသည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည်။ Facebook ကုမ္ပဏီသည်ဤကဒ်စတင်ခြင်းနှင့်အတူမရပ်တည်နိုင်သေးပါ အမျိုးအစား
luis သို့ပြန်သွားရန် - Paypal ကိုစစ်ဆေးပါ
faaa အားဖြင့်ချီလီအတွက် !!!!!!!!!!!!!!!! ငါချီလီပီဆိုအချို့ကို zynga ဂိမ်းတစ်ခုထဲထည့်ချင်တယ်။ ငါ zynga ကဒ်တွေကိုသူတို့ရောင်းတာနဲ့အနီးဆုံးမှာမရနိုင်ဘူး။ ငါမာဖီးယားစစ်ပွဲတွေမှာရမှတ်တွေမြှင့်တင်ရမယ်။ mercadolibre အတွက်? လေးစားပါတယ်
ငါးအတွက်တစ်စုံတစ် ဦး က rep.dom တွင်ဤသည်ဖလှယ်ရန်ပြောနိုင်သည်
တကယ်လို့တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုထည့်ချင်ရင် Paola ပဲ။ သူကငါ့ကိုနမ်းပြီးကျေးဇူးတင်တယ်။
ငါ့နာမည် Andrew And ငါအသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ
ပီရူး - လီမာသည်ရောင်းရန်ရှိမရှိသင်ပြောနိုင်သလော
သူတို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသင့်ကိုလက်နက်တွေပေးတဲ့ MARVEL AVERGERS ဆီကစာတစ်စောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကတ်ကိုဝယ်ပြီးသူကငါ့ကိုဘာမှမပေးခဲ့ဘူး၊ ဒီကိစ္စကဘာလဲ။
ငါလူမှုရေးစစ်ပွဲများအတွက်ငွေသားချင်ပေမယ့် decond activat ကဒ်မ d
Hayro Zavaleta Tambo ဟုသူကပြောသည်
Hayro Zavaleta Tambo အားပြန်ပြောပါ
Carlos Ivan Cruz gomez ဟုသူကပြောသည်
carlos ivan cruz gomez သို့ပြန်သွားရန်
ဘယ်မှာလဲ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုပြောပြပါ😀
Esteferson Narvaez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဤကဒ်များကိုကျွန်ုပ်ဖြန့်ဖြူးချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားဖြန့်ဝေရန်ကောင်းသောအချက်ရှိသည်။ သူတို့ကိုရောင်းပါ»ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
Esteferson Narvaez အားပြန်ပြောပါ
sebastian montanteme ဟုသူကပြောသည်
sebastian montanteme အားပြန်ကြားပါ
Fabian Alvarado Castillo ဟုသူကပြောသည်
Fabian Alvarado Castillo သို့ပြန်သွားပါ
ငါ Pile Montt မှာနေတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ၁၁၅ fc card ကို blockbuster ထဲမှာဝယ်လိုက်တယ်။
henry perez အားပြန်ပြောပါ
alacon chacoma ဟုသူကပြောသည်
alfredo chacoma အားစာပြန်ပါ
BOLIVIA Porfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ဖြစ်သည်
moises romel အားပြန်ပြောပါ
Gabriela Del Pilar Brunet ဟုသူကပြောသည်
Gabriela Del Pilar Brunet အားပြန်ပြောပါ
Americo Garcia က ဟုသူကပြောသည်
Americo Garcia သို့ပြန်သွားပါ
ဂျော်နီ Bermon ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြည်တွင်းငွေကြေးဖြင့်မည်သို့ငွေချေးရမည်ကိုသင်သိသည်။ wartuner လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းကိုငါဖေ့စ်ဘွတ်ကနေကစားနေတယ်။ ကျွန်တော်ကငွေလိုတယ်။ ဒီကတ်တွေကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲမသိဘူး။
jonny bermon အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်ကဒ်ဝယ်ဖို့လိုသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းပြောပြပါ
အဒမ် Zambrana ဟုသူကပြောသည်
Adam Zambrana ကိုပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကို pin နံပါတ်ထည့်ပေးပါ
NíckólásBráyán Caniumil ဟုသူကပြောသည်
SANTIAGO တွင် San Bernardo ၌သူတို့သည် Chilean ကဒ်များကိုရောင်းကြသည်
NíckólásBráyán Caniumil ကိုပြန်သွားပါ
Jâvïêr Fernadez B က ဟုသူကပြောသည်
Jâvïêr Fernadez B ကိုပြန်ကြားပါ
Lange Ojeda Miguel ဟုသူကပြောသည်
ပြီးတော့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဖေ့စ်ဘွတ်အတွက်ကဒ်ဝယ်ဖို့ရူးသွပ်တဲ့သူမရှိဘူး၊ အကယ်၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့လို့ရတယ်။ neole-45456@hotmail.com
Lange Ojeda Miguel သို့ပြန်သွားပါ
Sergio အပ်ချုပ် ဟုသူကပြောသည်
ကတ်များကိုဥရုဂွေး၌ရှိသလားသိလိုပါသလား။ ငါသူတို့ကိုဘယ်မှာဝယ်တာလဲ ၎င်းသည်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်သောကြောင့်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်သင့်သည်မဟုတ်လော
Sergio Sastre အားပြန်ကြားပါ
RICHCOLOMBIAN ၁၉ ဟုသူကပြောသည်
ဟဲ၊ ငါဗင်နီဇွဲလားပါ။ မင်းငါ့ကိုဒေသခံငွေနဲ့ဘယ်လို ၀ ယ်ရမယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုရှင်းပြစေချင်တယ်၊ ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူး
ဟဲလိုငါ narnia ကနေ! ဒီကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်ပြားတွေဒီမှာလည်းရှိသင့်တယ် ဘာကြောင့် LUCI နှင့် DEIMON သည် Candy Crush ၏ဒုဖြစ်ရခြင်း
Google History ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ